INCUBATOR BLITZ: SHARAXAAD, ASTAAMAHA, SIDA LOO ISTICMAALO - KUFSI
Incubator Blitz: sharax, tusaal, qalab
Madeecada xayawaan adag, jidhka mindhicirka Blitz waxaa lagu daraa balaastiig caag ah. Galka taangiga waxaa la galvanized, kaas oo ka caawiya ilaalinta mikroclimate iyo nadaafadda ee nukliyeerka. Qalabkani wuxuu ku qaabeysan yahay qaab-dhismeedka, kaas oo ka dhigaya mid aad u habboon markaad ukumaha soo saareyso. Galka kiiska dhexdiisa, bartamaha, waa baakidhada ukunta, oo loo qaabeeyey si ay u xagalaan xagal (xajmiga dhabarka ee isku-buufiyeyaasha si toos ah ayaa isbeddelaya laba saacadood kasta).
Laga soo bilaabo bannaanka xaraashka, qoob-ka-soo-qaboojiyaha waxaa lagu rakibay bandhig dijitaal ah oo sameeya dhawr farsamood mar. Thanks to qalabka, waxaad la socon kartaa hawlgalka qalabka iyo hagaajinayso goobaha qalabka. Waxaa sidoo kale jira dareeraha heerkulka gudaha kaas oo ka shaqeeya saxsanaanta 0.1 darajo. Waxaa suurtagal ah in la qiyaaso qoyaanka Orenburg Blitz kuleylaha iyadoo la isticmaalayo farsamayaqaan farsamo.
Qalabka qalabku wuxuu leeyahay laba koob oo biyo ah, oo leh hab fudud oo loo isticmaalo in lagu daro dareeraha: waxaa lagu dari karaa iyada oo aan laga saarin daboolka sare. Maxaa si gaar ah u fiican - wuxuu ka fakaray suurtogalnimada in uu kala furo korontada ugu weyn. Xaaladdan, qalabku wuxuu u beddeli doonaa hab muuqaal ah - laga bilaabo batteriga.
Qalabka farsamada ee qalabka
Qalabka Blitz 72 ee loogu talagalay waxaa loogu talagalay 72 ukun digaag ah, iyo sidoo kale 200 digaag, 30 goos ama 57 ukun duur. Qalabka waxaa lagu qalabeeyaa hal taayir (ukunta digaagada lagu duugo ayaa laga heli karaa codsadaha iibsadaha), wareega tooska ah (labadii saacadoodba) oo siman. Xirmada waxaa ka mid ah laba gawaarid iyo barkad biyo ah.
Miisaanka saafiga ah - 9.5 kg;
Size - 710x350x316;
Dhumucda darbiga derbi-socodka - 30 mm;
Qiyaasta qoyaanka - laga bilaabo 40% ilaa 80%
Awoodda - 60 watts;
Nolosha batterigu waa 22 saacadood;
Awoodda batteriga - 12V.
Qalabka wax soo saarka ee Blitz wuxuu damaanad qaadayaa alaabta - laba sano. Beteriga batteri waxaa si gooni ah loo iibsadaa.
Ma taqaanaa? Qaybta qolofta ukunta waxay leedahay 17,000 oo ah godadka mareegta ee sanbabada. Taasi waa sababta beeralayda daaqsatada ah ee khibrada leh aanay kugula talineynin in lagu kaydiyo ukumaha weelka daboolan. Sababtoo ah xaqiiqda ah in ukunku aanu "neefsanayn", waxa si xun loo kaydiyaa.
Sida loo isticmaalo Isqoristaha Blitz
Fududeynta qaabka qalabka Blitz ayaa ku jira barnaamijka otomaatiga ee naqshadda: Hore mar, haddii ay dhacdo koronto la'aan, barnaamijku wuxuu ku shaqeyn doonaa bateriga.
Qalabka kuleylaha ee Blitz ayaa ka dhigaya mid aad u fudud in loo diyaariyo shaqada: waa ku filan si loo hubiyo in dareemayaasha iyo qalabka kale ee farsamadu ay shaqaynayaan.
Sidoo kale hubi aaminta batteriga, batariga, xadhkaha korontada iyo batteriga oo buuxa.
Ka dib markaa, ku buuxi qubeyska biyo diirran isla markaana u habee dareeraha heerkulka. Qalabku waa diyaar.
Xeerarka qandaraaska ee Isku-xidhka Blitz
Markaad ukumaha ku ridayso qandaraaska Blitz 72, tallaabooyinka soo socda waa in la sameeyaa:
U ururi ukunta leh casriyeeyn muddo aan ka badneyn 10 maalmood, oo lagu kaydiyey heerkul ah 10 ° C ilaa 15 ° C. Calaamadee cillado (dhayid, dildilaacyo).
U ogolow in ukumaha kuleyliyo heerkul aan ka badneyn 25 ° C ilaa siddeed saacadood.
Biyo iyo dhalooyin biyo ku buuxi.
Mashiinka saar oo kulul ilaa 37.8 ° C.
Markaad ukumayntu ka badan tahay xaddiga ku qoran tilmaamaha.
Waa muhiim! Uma baahnid inaad ku dhaqdo ukumaha ka hor inta aadan ku koobin, sidaas darteed waxaad yareysaa badbaadadooda.
Toddobaad kaddib markaad calaamadeysid waxaad ka hubin kartaa helitaanka ilmaha caloosha iyadoo la adeegsanaayo shay-baarka
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada ka jirta kulubka Blitz
Ka baaraandegida aragtiyooyinka, faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee soo-qaboojiyaha waa dhib badan marka ay ku darayaan biyo (dalool yar oo cidhiidhi ah) iyo dhib la'aan markaad ukumaynayso.
Gaadiidka baakidhka leh ukumaha iyada oo aan laga saarin ka soo kicinta waa dhibaato, iyo gawaarida lagu riixo meel waa halis culus.
Laakiin waxaa jira faa'iidooyin faa'iido leh:
Daboolka sare ee hufan wuxuu u suurtageliyaa in uu la socdo geeddi-socodka iyada oo aan laga saarin.
Taabbooyinka la beddeli karo waxay kuu oggolaanayaan inaad muujiso ma aha kaliya digaagga, laakiin sidoo kale shimbiraha kale.
Qalab fudud oo sahlan oo qalab ah.
Taageerada la dhisay ayaa qaboojinta ukumaha ku jira kululaynta Blitz haddii ay dhacdo kuleylka.
Qalabyada ku yaal qalabka ayaa kuu oggolaanaya inaad kormeerto heerkulka iyo qoyaanka, akhriskooduna waa muuqanayaa muuqaalka dibedda.
Ma taqaanaa? Badeecad aan caadi aheyn ayaa lagu qabtay Bordeaux 2002-dii, halkaas oo seddex geedka dinosaurka lagu iibiyey. Ukuntu waa dhab, da'doodu waa 120 milyan oo sano. Qiimaha taariikhiga ah, ugu weyn ee ukunta, ayaa lagu iibiyey 520 euro oo keliya.
Sidee si habboon u keydisaa Blitz
Kadib dhammaadka habka kulubka, ka fur cutubka ka soo baxa shabakad (automatic) Blitz 72 oo ka saar faahfaahinta gudaha: daboolayaa taageerida dhaqdhaqaaqa, dhalooyinka, tuubooyinka, qolka kululaynta, daboolka, saxanka, qubeyska, muraayadaha quudinta iyo taageeraha, ka dibna si taxadar leh ugu tirtir iyaga xal daciif ah oo ah kiniinka potassium.
Si aad u daadisid dareeraha haray ee qubayska, sii wad sida soo socota:
Kor uji dhalada dibedda oo sug in biyaha ay soo maraan tuubooyinka.
Ka faaruqi muraayadda tuubooyinka tuubada, ku riix geeska muraayadda dhalada ah oo ku shub biyo intiisa kale, adigoo qubeyska ku dhejinaya qaybta isweydaarsanaya tuubada.
Ka dib markaad wax-qabadka ka dhigto, ku rid maskaxda meel qallalan, oo aan saameyn ku yeelan doonin qoyaanka ama heer-kulka sare, hana ilaawin inaad daboolatid si looga badbaado dhaawac ka soo gaaro.
Cilladaha waaweyn iyo ka saarista
Waxaan baari doonaa dhibaatooyinka suurtagalka ah ee la xidhiidha isbitaallada Blitz.
Kombiyuutarada oo ku yaala ma shaqeynayo. Waxaa jiri kara burbur ku yimaada korantada ama xadhig khafiif ah. Iska hubi.
Haddii naqshaduhu ma kululaan kuleylka, waxaad u baahan tahay inaad jeediso badhanka kululeeyaha ee guddiga kantaroolka.
Haddii kuleylku waa mid aan simanayn - jabinta qalabka jilidda.
Tilmaamidda saxda ah ee shaqeynaya ma shaqaynayso. Iska hubi in saxaaraddu ay ku dhegan tahay mashiinka isla markaana u hagaajin haddii loo baahdo. Ku soo noqoshada kiiskan ma shaqeynayo, Tani waxay ka dhigan tahay in ay jirto burbur ku yimaada habka gearmotor-ka ama nasashada wareegga xiriirka ayaa dhacay. Si aad u fahamtid qalabkeeda, u adeegso tilmaamaha loogu talagalay dhiirrigeliyaha Blitz.
Waa muhiim! Haddii bateriga uusan soo jeedin, fiiri haddii si habboon u xiran yihiin. Sidoo kale fiiri daacadnimada kiiska bateriga iyo xargaha.
Marka laga hadlayo muujinta heerkulka khaladka ah, hubi haddii dareeraha heerkulka la jabiyo.
Haddii kuleylaha lagu soo jeesto ama dibedda u dhexeyso mudo gaaban, isla mar ahaantaana, tusaha shabakadku uu iftiimayo, ka jooji batteriga - waxaa laga yaabaa in la buuxiyo.
Ugu dambeyntii, waxaan soo gabagabeyneynaa: Sida laga soo xigtay dib u eegista beeralayda iyo beeraleyda digaaga, kulankan ayaa soo buuxiya dhammaan baahida macaamiisha, dhibaatooyinka iyo burburka, nasiib daro, inta badan waxay ku dhacaan khalad macaamiisha ah. Markaa ha ilaawin inaad eegto tilmaamaha oo aad u hoggaansanto shuruudaha loo isticmaalo isticmaalka Blitz 72 incubator, kuwaas oo ku qoran buug-tilmaameedka (oo lagu darey badeecada laga keeno maktabadda).